फर्सीको मु’न्टा मि’ठो मात्र हैन छन् अने’कौँ फाइदा - HPsanchar.com
फर्सीको मु’न्टा मि’ठो मात्र हैन छन् अने’कौँ फाइदा
October 16, 2020 biplov adhikari खानपान 0
फर्सीको मु’न्टा भन्नसाथ तपाईंको मु’खमा पानी आउँछ । धेरैका लागि यो स्वादिलो सब्जी हो । बेथे र लट्टेको स्वाद पनि ति’ख्खर हुन्छ । अतः यी सबै अहिलेको मौसमी सागपात हुन् । मौसम अनुकुल सागपात किन खाने ? दुई कारण छन् । एक, यसमा असली स्वा’द पाउन सकिन्छ । दोस्रो, आवश्यक पौ’ष्टिक तत्व पाइन्छ । हुन त हामी वे’मौसमी खानेकुरा खोजिरहेका हुन्छौ । तर, वे’मौसमको खानेकुरा श’रीरका लागि त्यती ला’भदायक हुन्दैन । किनभने वे’मौसमी उत्पादनका लागि कृ’तिम शैली अपनाइन्छ । प्रा’कृतिक रुपमा उ’ब्जाउ भएको हुँदैन । त्यसैगरी वेमौसमी खानेकुरा फलाउन, भण्डारण गर्न केही यस्ता तरिका अपनाइन्छ, जो त्यती स्वस्थ्यकर हुँदैन । अहिले वर्षायाममा सुरु भइसकेको छ । यतिबेला फर्सीको मु’न्टा, बे’थे, ल’ट्टे जस्ता सागपात प्रशस्तै पाइन्छ । यी सागपात निकै लाभदायक हुन्छ, स्वा’स्थ्यका लागि ।
फर्सीको साग किन खाने ? फर्सीको मु’न्टा फाइबरको राम्रो स्रोत हो । यसले पा’चन यन्त्रलाई राम्रो बनाउँछ । यसमा भि’टामिन ई, सी, ए, बी, पो’टासियम, फो’लिक ए’सिड, क्या’ल्सियम, क’पर, प्रो’टिन पाइन्छ । साथै यो आ’इरन, फ’स्फोरस जस्ता ख’निज पदार्थको स्रोत पनि हो । यसमा फा’इबर त पाइने नै भयो । फर्सीको पात तथा मु’न्टाको सेवनले हामीलाई कतिपय रोगको सं’भावनाबाट टाढा राख्छ । फ’र्सीको मु’न्टा खासगरी उच्च रक्त’चाप, को’लेस्ट्रोल, क्या’न्सर जस्ता रो’गबाट बच्न लाभदायक हुन्छ । फर्सीको मु’न्टामा हा’इपोग्लिसिएमिक नामक तत्व हुन्छ, जसले श’रीरमा ग्लुकोजको मात्रा नियन्त्रण गर्छ । पा’चन यन्त्रलाई त’न्दुरुस्त राख्न पनि यो उपोगी हुन्छ । यसमा पाइने पो’टासियमले पा’चन यन्त्रलाई चुस्त राख्छ । ल’ट्टेको साग किन खाने ? कतिपयलाई औ’धी स्वाद लाग्छ, ल’ट्टेको साग । वैशाखदेखि जेठसम्मको अवधीमा ल’ट्टेको साग पर्याप्त पाइन्छ । यो सजिलै उ’म्रने र हु’र्कने भएकाले सस्तो पनि पर्छ । साथै यसमा कि’टनासक लगायत हा’निकारक तत्व प्रयोग हुने संभावना पनि न्युन हुन्छ । ल’ट्टेको व्यवसायिक खेती गरिएको त्यती पाइदैन । सिजनमा अनुकुल माटोमा सजिलै उम्रने भएकाले यसको व्यवसायिक खेती नभएको हुनसक्छ । जे भएपनि ल’ट्टेको साग भने स्वा’स्थ्यका लागि निकै लाभदायक छ । लट्ेको सागमा विभिन्न किसिमको पो’षक तत्व पाइन्छ । यसमा खासगरी ख’निज पदार्थ फलाम, क्या’ल्सियम, म्या’ग्नेसियम प्रचुर मात्रामा पाइन्छ ।
बे’थेको साग किन खाने ? बे’थेको साग दुई किसिमको हुन्छ, एक सामान्य हरियो पात भएको । अर्को पातमा रातो भएको । दुबै किसिमको साग निकै लाभदायक हुन्छ । खासगरी खो’की, पे’टको समस्या, क’ब्जियतमा बे’थेको साग उपयोगी हुन्छ । बे’थेको साग नियमित से’वन गर्दा बा’थ अर्थात यु’रिक ए’सिड, र’क्त वा छा’लाको वि’कार हट्छ । बे’थेको सा’गले श’रीरभित्रको वि’कार ह’टाउन निकै सहयोग गर्छ । बे’थेको सागमा कार्बो’हाइड्रेट, प्रो’टिन, क्या’ल्सियम, भि’टामिन, मिन’रल्स, आ’इरन प्रचुर मात्रामा पाइन्छ । यसमा सोना धातु पनि पाइन्छ, जो अन्य सागसब्जीमा पाइदैन । औ’षधीको रुपमा बेथेको पञ्चाङ अर्थात पाँच अंग ज’रा, डाँ’ठ, पात, फल र फूल प्रयोग गरिन्छ। यसको डाँ’ठ र पातमा प्रोटिन, खनिज, भिटामिन पाइन्छ । बेथेको सागमा सेलिनियम, ओ’मेग थि्र पनि पाइन्छ । अनियमित म’हिनावरी, क’ब्जियत, प’त्थरी जस्ता समस्यामा बे’थेको साग उपयोगी हुन्छ ।
त’रकारी खादाँ नु’न चर्को खा’ने बानी छ ? ज्या’दा नुन चर्को खाना’ले ब’ढ्नसक्छ यस्तो स’मस्या ! हा’म्रो श’रीरका लागि नुन अ’त्यावश्यक खाद्यपदार्थ हो । यसले शरीरमा सो’डियमको मात्रा कायम राख्छ । मां’सपेशी, तन्त्रिका, तरल पदार्थ आदिलाई सन्तुलनमा राख्न पनि नु’नमा पाइने तत्वले विशेष भूमिका खेलिरहेको हुन्छ । तर, अत्यधिक नुन खाएमा त्यसले शरीरमा नकारात्मक अ’सर पार्छ भन्ने बुझ्न जरुरी छ ।
-नुनको बढी सेवनले मस्तिष्क, धमनी र मुटुमा बढी असर गर्छ । शरीरका रसायनमा असन्तुलन आई मानिसको मृत्युसमेत हुन सक्छ । -विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार एउटा व्यक्तिले प्रत्येक दिन ५ ग्रामभन्दा बढी नुन सेवन गर्नु स्वास्थ्यका लागि हानिकारक छ । तर, दक्षिण अफ्रिकीहरू एक दिनमा ८ दशमलव ५ ग्राम नुन खाने गर्छन् । जुन पक्षाघात (स्ट्रोक) र हृदयाघातको कारण बनिरहेको छ । -वयस्क मानिसमा आवश्यकभन्दा बढी सोडियम हृ’दयरोगको कारक बन्ने गर्छ । -खानेकुरामा प्रयोग गरिने सोडियमको अत्यधिक मात्राले उच्च र’क्तचाप निम्त्याउँछ । बुढेसकालमा सोच्ने शक्तिमा समेत ह्रास ल्याउँछ । -शरीरमा सोडियमको मात्रा बढी हुँदा घुँडा र हातखुट्टा सुन्निने समस्या देखा पर्छ । -खानेकुरामा नुनको प्रयोग गर्दा त्यो स्वादिष्ट अवश्य हुन्छ । तर, कतिपय खानेकुरा छन्, जसमा नुनको मात्रा मिल्दैन । यस्तो हुँदा त्यसले झनै बढी अस’र गर्ने गर्दछ ।
-प्रशोधित खानेकुरामा प्रयोग गरिने अत्यधिक नुनले पेटमा क्या’न्सर हुने सम्भावना रहन्छ । यसबाट महिलाभन्दा पुरुष बढी प्रभावित हुने गरेका छन् । सिामान्यतया मि’र्गौलाले शरीरमा रहेका विकारजन्य वस्तु हटाउने, तरल पदार्थ सन्तुलनमा राख्ने र रातो रक्तकोषिकाको वृद्धिलाई नियन्त्रण गर्ने काम गर्छ । यद्यपि, उच्च र’क्तचापका बिरामीले बढी नुन सेवन गर्दा मि’र्गौलाले शरीरका विषाक्त तत्व हटाउन असमर्थ हुन्छ । परिणामस्वरूप मि’र्गौला बिग्रने सम्भावना रहन्छ । -उच्च सोडियमयुक्त खाना, खासगरी प्रशोधित खाद्यपदार्थले शरीरमा आवश्यकताभन्दा बढी पानीको मात्रा कायम गर्छ । जसले गर्दा स्वा’स्थ्यमा विभिन्न समस्या देखा पर्छ ।
तौल घ’ट्दै घ’टेन ? चि’न्ता नलिनुहोस् यसरी घ’टाउन सकिन्छ
बि’रयानी मन पर्छ ? यसरी स’जिलैसंग घरमै बनाउन सकिन्छ चि’केन बि’रयानी